Ama-Floor Grinders, Ama-Industrial Dust Collectors, Floor polisher - Ares
Uchungechunge lwe-Flames lwama-grinder aphansi ngaphansi komkhiqizo we-Ares seluphenduke umshini othandwayo emkhakheni wokugaya umhlabathi nokupholishwa kukakhonkolo.
Uchungechunge lwe-Storm lokukhuhla phansi ngaphansi komkhiqizo we-Ares lufanele ukuhlanzwa nokuvikelwa kwe-epoxy resin, upende, i-terrazzo, i-emery, i-ceramic tile, imabula nezinye izitezi eziyisicaba. Ukuhlanza, ukomiswa kanye nokubulala amagciwane kungenziwa ngesikhathi esisodwa.
Uchungechunge lwe-Thunder lwabaqoqi bothuli bezimboni ngaphansi kophawu lwe-Ares alukwazi nje ukunciphisa uthuli oluphuma emoyeni kanye nezinhlayiya kodwa futhi lungahlinzeka ngendawo yokusebenza ehlanzekile.
ukuphishekela ikhwalithi engcono kakhulu
I-Ares Floor Systems iwuphawu olusezingeni eliphezulu oluphethwe yi-Shanghai Jiansong futhi iyinkampani yobuchwepheshe ekhula ngokushesha ekhiqiza futhi ithuthukise imikhiqizo yokucubungula ngaphezulu. Imboni ihlanganisa: i-floor grinder, i-vacuum cleaner yasezimbonini, ipholisha yaphansi, imoto eshanelayo, izesekeli nezinto ezisetshenziswayo kanye nolunye uchungechunge lwemikhiqizo ecishe ibe yi-100 eyi-11.
I-Shanghai Jiansong iyibhizinisi elinamandla neliholayo emkhakheni wesistimu yomhlabathi.
Uchungechunge lweFlames lokugaya phansi ngaphansi kwe-Ares ...
Uchungechunge lwe-Thunder lokuqoqa uthuli lwezimboni...
Uchungechunge lweFlames lokupholisha phansi ngaphansi kwe-Ares ...
Uchungechunge lwe-Storm lwe-Floor scrubbers ngaphansi kwe-Ares ...
Ngezinga eliphezulu lesevisi kanye nezisombululo ezingcono kakhulu nezisha kakhulu emakethe,
sinikeza amakhasimende ethu emhlabeni wonke indlela elula, evumelana nemvelo nenenzuzo yokwenza imisebenzi yawo yansuku zonke.
I-Car Shampoo Vacuum, Isikhiqizi Sezihlalo Zemoto, I-Gear Driven Floor Grinder, Umshini Wokugaya Oyisicaba, Umshini Wokugaya Izihlahla, Umshini Wokugaya Ngesivinini Esikhulu,